Murtiin Du’aa Dachaan Kennamaa Jira; Balaaleffannaanis Itti Fufe!
Date: May 22, 2010Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia/ Finfinnee/ Caamsaa 22,2010) Guyyaa Hawaasi Oromoo biyya alaa irraa hiriirra bahee hidhaa fi ajjeechaa Oromoo irratti tahu mormaa jirutti, dhaddechi Wayyaanee sadaffaan Sabbontota Oromoo irratti ammas murtii du’aa murteesse.
Maddi Oduu ABO /MOAn/ Finfinneetii akka gabaasetti, dhaddechi Wayyeenee federaalaa kana dura ilmaan Oromoo kudha shan irratti murtii dabaa dabarse, ammas ilmaan Oromoo qulqulluu irratti murtii du’aa haga hidhaa bara dheeraa dabarsee jira.
Murtii ajaja Abbaay Tsahaayyee, kan Ministeera Dhimmoota Federaalaa Wayyaaneetiin kenname kanaan, ilmaan Oromoo Adoolessa bara 2008 Finfinneefi Oromiyaa bakka garaa garaa keessaa qabamanii hiraarsamaa turan afur murtii du’aan akka adabaman, kanneen hafan sadii immoo murtii hidhaa bara guutuu haga amata lamaa akka adabaman godhamee jira.
Akka kanaan Oromoota armaa gadii kana irratti dhaddachi sadaffaa, mana murtii federaalaa Wayyaanee gaafa Caamsaa 20,2010 ganama murtiin haqa irraa dabe Oromummaan yakkuun itti kennite keessaa maqaan isaanii:-
1. Dirribee Ettaanaa – Du’a
2. Degguu Ettaanaa – Du’a
3. Urgee Abebee- Du’a
4. Girmaa Raggaasaa- Umrii guutuu
5. Endalee Nagarii waggaa 10
6. Werkinesh Duubee- waggaa lamaaf qarshii 2000
7. Daniel Jaalataa- (kan dur du’e jiru) murtii du’aa
Addee Dirribee Ittaanaa fi Degguu Ittaana- Obbolawwani.kana irratti dabalees Urgee Ababeefi Girmaa Ragasaa abba manaafi haadha mana tahuun beekamaa dha.
Wayyaaneen guyyaa hawaast Oromoo Australia, Norway fi USA akkasumas Waldaan Qorannoo Oromoo (OSA) hiriira mormii waamanii mootummaa Wayyaanee balaaleffataa fi adunyaatti saaxilaa jiranitt, dhaddechi Wayyaanee maal na dhibdee fi tuffiin guyyuma hiriirri alaa deemu kana murtii dabaa ilmaan Oromoo irratti dabarsitee jirti.
“Gochaan akkanaa ilamaan Oromoo daran xiiqessee gumaa baafannaaf kakaasa,” kan jedhan sabboontoti Oromoo, “diina maal na dhibeen guutamee, ilmaan Oromoo adabaa jiru callisanii ilaaluun hinta’u,” jedhanii jiru. “Yeroon diina keenya adabnee, naasisuufi salphisuu qabnus amma,” kan jedhan sabboontoti Oromoo,” kana booda teenyee du’a mana mana keenyatti nurratti kennamu eeguu hinqabnu,” jechuun gabaasaa MOAf ibsanii jiru.
Mootummaan Wayyaanee akkuma amala ishii, jibbaa akkaan hadhaawe Oromoof qabdu irraa kan ka’e Oromoota 7 irratti murtii du’aa fi hidhaa waggaa dheeraa kennuun ishii hariiroon mootummaa kanaa fi ummata Oromoo gidduu jiru sadarkaa araaramuu hin adandeenyetti ce’aa akka jiru illee MOAn dabalee gabaasee jira.
Sabboontonni ilmaan Oromoo guyyuu mana murtii wayyaanee keessatti haqaan ala hidhaa fi ajjeechaan irratti murtaawuun araada Wayyaanotaa tahee jira. Kana irrattis Oromoon biyya ambaa jiran biyyoota jiran mara keessatti hiriira nagaa bahuun mormii isaanii dhageessisaa akka jirans beekamaa dha .Akka kanaan gaafa Caamsaa 21, Washington DC, Australia, Adoolessa 20 Oslotti hiriirri diddaa hawaasa Oromoo ala jiruun tahuun gabaasamee jira.
Previous Previous post: Deeggartooti Wayyaanee Kaardii Falannoo Birriin Bitaa jiru!
Next Next post: “The suffering of Oromo Refugees is ntensifying” AFO